Knowledge – Page 47 – WunYan
ထီထိုးပြီး ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးတဲ့သူများ အတွက် ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်း
ထီထိုးပြီး ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးတဲ့သူများ အတွက် ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းမို့ ရှဲယူထားလိုက်ပါ ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ ~~(၁၄) ** ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်စိတ်ဝယ်ထုံ “ဗုဒ္ဓေါ” ဂုဏ်ပွား ကောင်းကျိုးများ ** (၁) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ရေအိုးတစ်လုံးအား (မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်တွင်ထားရှိရန်သင့်တော်မည့်အရွယ်) ရေအပြည့်ဖြည့်ကာ…. (က) အင်္ဂါနေ့ နံနက်/ည ၆-နရီ ၁၀-မိနစ် မှ၇-နာရီ ၂၀-မိနစ် အတွင်းဖြစ်စေ (ခ) စနေနေ့…
ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မှန်ရင် ဘုရားစေတီတွေရဲ့ရှေ့မှာ ခြသေ့င်္ရုပ်ထားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိထားသင့်ပါတယ်
ဘုရားစေတီတိုင်းလိုလိုရဲ့ ရှေ့မှာ ခြသေ့င်္ရုပ်တွေရှိတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုထားရသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ သိသူရှိသလို မသိသူများလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ မသိသေးသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ဖြေဆိုခဲ့သူက အမပူရနန်းတည် ဘိုးတော် ဘုရားလက်ထက် ပရိယတ္တိအရာမှာ နေတစ်ဆူလတစ်ပါး ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်ပင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက ဘုရားစေတီ မုခ်ဝမုခ်ဦး၌ ခြသေ့င်္ရုပ်တုများ ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး- “ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာ ပဒုမ…
သူ ၈ တန်းနှစ်မှာပဲ အမေ က (….)ဘာသာ အနီးကပ် ဂိုကတစ်ယောက်ကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့တယ်-အသက် ၅၀ အဲဒီ ဆရာကြီးဟာအမေနဲ့ တရား ဆွေးနွေးဖော် ဆွေးနွေးဖက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီဆရာကြီးဟာ အမေလစ်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကို တဏှာစကားသာ ပြောခဲ့တယ်..ပထမတော့ ချစ်လို့ဆိုပြီး သူ့ကိုဖက်ပါတယ်..-နောက်တော့ သူ့တင်တွေကို ပွတ်တယ်..နောက်ဆုံး ဆူဖြိုးစပြုနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ ရင်သားကို လာကိုင်တဲ့အခါမှာတော့အမေ့ကို သူ အဲဒီအကြောင်းတိုင်ပါတယ်..-သူ့ဘဝမှာ အနာကျင်ရဆုံးကတော့ အမေ က…
အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကောသလ အိပ်မက် ၁၆ ချက်
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်မှာ ကောသလမင်းကြီးက အိပ်မက် ၁၆ ချက် မက်တော့ ဘုရားရှင်ထံ မေးမြန်းရာ ဘုရားရှင်က ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အချက် ၁၆ ချက်က နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် အချို့ အချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၆ ချက်ကတော့ (၁) အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးခုသော နွားလား ဥသဘတို့သည် လာလတ်၍…
မိဘနှစ်ပါးကို ဆွမ်းခံကျွေးသော ရဟန်း
သာဝတ္ထိပြည်တွင် တစ်ဆယ့်ရှစ်ကုဋေ ကြွယ်ဝသော သူဌေးဇနီးမောင်နှံ၌ တစ်ဦးတည်းသော သားတစ်ယောက်ရှိ၏။ ထိုသားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို နာရ၍ သာသနာတော်၌ ထက် သန်သော သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပေါ်ပြီးလျှင် ရဟန်းပြုခွင့်ပေးရန် မိဘများထံ ခွင့်ပန်သဖြင့် ခွင့်မပြုလိုသော်လည်း တစ်ဦးတည်းသောသား စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက် မိဘများက ခွင့်ပြုလိုက်ရ၏။ ရဟန်းသစ်သည် တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားရှိ ရွာငယ်တစ်ရွာအနီး တောရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးလျက်ဝိပဿနာ တရားကို ကြိုးစားအားထုတ်၏။ ရဟန်းတော်သည် တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်…
ခု​ခေတ်​မှာ မြန်​မာမိန်းက​လေးအများစု ဘယ်​လိုဘဝပျက်​သွားသလဲဆိုတာ သိ​စေချင်​လို့
ခု​ခေတ်​မှာ မြန်​မာမိန်းက​လေးအများစု ဘယ်​လိုဘဝပျက်​သွားသလဲဆိုတာ သိ​စေချင်​လို့ ဒီ post ကို တင်​ရတာပါ ။ အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ” ” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “” ချစ်ကလည်းကွာ “” မောင်က…
မှန်ကန် တဲ့ အစားအသောက် တွေ စားသုံးခြင်းက စလို့ သေချာတဲ့ Positionတွေ အသုံးပြုခြင်းအထိ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး ကို အသုံးပြုပြီး ဇနီးမောင်နှံ တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေး ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ သိပ်တော့မထိရောက်လှပါဘူး။ ကလေး ရယူဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် ကလေးရစေနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းကတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့…
ကန်​​တော်​ကြီး ပဲ​လေ့စ်​ဟိုတယ်​ရှိ ဒေါင်းရုပ်​၏ သမိုင်း
ထို​ဒေါင်းရုပ်​မှာ (၁၈၈၀) ခုနှစ်​၀န်းကျင်​​​ကာလ၌ ရတနာပုံ နန်းတွင်းအမတ်​ ဦးကောက်ဆိုသူသည် ပုသိမ်​ကြီးမြို့နယ်​ရှိ တောအုပ်​ထဲ​မှရှိခဲ့သော ကညင်​ပင်​နှင့်​ကျွန်းပင်​ နှစ်​ပင်​တစ်​ပင်​စပ်​ယှက်​ပြီး​ ပေါက်​​နေသည့်သစ်​ပင်​ကို ထုဆစ်​ထားသည့် ရတနာပုံ​ခေတ်​ လက်​ရာတစ်ခု​ဖြစ်ကြောင်း။ နန်းတွင်းလက်​သမားဆရာကြီး မြို့သာအပိုင်​စားဦးဖိုးကွန်းက (၇) ရက်​တိုင်​တိုင်​ ဗန်း​မော်​​ကျောင်းတိုက်​ရှိ ဆရာ​တော်​များထံ ဥပုသ်​သီလ​ဆောက်​တည်​/သက်သက်လွတ်စားကာ ​ရုပ်​တုအကြမ်း ထုဆစ်​ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ထို့မှတဆင့် မန္တ​လေး/တမ္ပ၀တီရပ်​ရှိ လောကီဆရာကြီး ဦးလှဇံထံအပ်​နှံကာ သုံးရက်​တိုင်တိုင်​ အစီအရင်​များဖြင့်​ သိဒ္ဓိတင်​ပြီး မီးအကြိမ်​ကြိမ်​ စမ်းသပ်​ရှို့ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်း။…
လက်တွေ့ကျကျ ပုရွက်ဆိတ်အန္တာရာယ် နှိမ်နင်းနည်း
မုန့် အချိုများ နှင့် အစားအစာတွေက ပုရွက်ဆိတ်တွေအတွက် သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်ကြ သလို၊ တခါတရံ ပန်းပင်တွေပေါ်အုံခဲနေ တတ်ပြီး အပင်များကိုသေစေတတ် တာကြောင့်၊ အိမ်ရှင်မများစိတ်ညစ်ရပြီပေါ့ရှင်။ ဟောဒီမှာ သဘာဝကျကျနှိမ်နင်းနိုင် တဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေရှိလို့စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါဦးနော်။ (၁) မုန့် လုပ်ဆော်ဒါက ပုရွက်ဆိတ်တွေအတွက် အဆိပ်မှုန့် ဖြစ်စေလို့ ၊ ပုရွက်ဆိတ် အုံပေါ် ဆော်ဒါမှုန့် ဖြူးပေးပါ။ (သို…